Nooca Badbaadada Tayada-sare leh cadaadiska wanaagsan ee warshad kateetarka IV iyo saarayaasha | Sanxin
Isku xiraha cadaadiska saxda ah ee aan cirbadaha lahayn wuxuu leeyahay howl socod oo socod ah halkii uu kaxi lahaa tuubada qufulka cadaadiska togan ee gacanta, si wax ku ool ah looga hortago qulqulka dhiigga, yaraynta xirmooyinka kateetarka iyo kahortaga dhibaatooyinka faleebada sida phlebitis.
Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd waa shirkad farsamo sare oo heer qaran ah oo ku takhasustay aaladda caafimaadka R&D, wax soo saarka, iibka iyo adeegga. Ka dib in ka badan 20 sano oo raasamaal ah, shirkaddu waxay leedahay aragti caalami ah, oo si dhow ula socota istiraatiijiyado horumarineed oo heer qaran ah, si dhow ula socota baahiyaha caafimaad, iyada oo ku tiirsan nidaamka maaraynta tayada codka iyo qaangaadhnimada R&D iyo waxsoosaarka wax soo saar, Sanxin ayaa hoggaanka u qabatay warshadaha si ay u dhaafto nidaamka maaraynta tayada ee CE iyo CMD.
Conne Isku xiraha cadaadiska aan fiicnayn ee cirbadda leh wuxuu leeyahay hawl socod oo socod ah halkii uu ka qaadan lahaa tubbada qufulka cadaadiska saxda ah ee gacanta, si wax ku ool ah looga hortago dib u qulqulka dhiigga, yaraynta xirmooyinka kateetarka iyo ka hortagga dhibaatooyinka faleebada sida phlebitis.
Device Qalabka gaashaaman ee cirbadeynta khaaska ah wuxuu hubiyaa in tuubada irbadda dib loogu celiyo daboolka ka hortagga ka dib markii daloolku guuleysto, taasoo si wax ku ool ah uga hortageysa in shaqaalaha caafimaadka ay si kadis ah irbadda u dalooliyaan iskana ilaaliso infekshinka iskutallaabta.
Hore: Qalabka qaboojiye ee xalka wadnaha ee qabow ee loogu talagalay isticmaalka keliya
Xiga: Sirinjiyada nadiifka ah ee hal mar loo isticmaalo
Noocyada Iv Catheter
Cirbadaha Iv Catheter
Iv Kateetarayaasha Iibinta
Xidhmada kateetarka xididka dhexe
Cadaadis wanaagsan oo tubada IV ah
Kateetarka xidha IV